၎င်းသည်ယိုစိမ့်မှုအရ HTC U12 Plus ၏သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည် Androidsis
ယနေ့ စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်သည်ယခင်ကထက်ပိုမိုပြည့်နှက်နေသည်HTC ၏အောင်မြင်သောမှတ်တမ်းများရှိသည့်နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီများသည်ယခုကျွန်ုပ်တို့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကောင်းမွန်စွာမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ဤဆောင်ပါး.
သို့သော်အပြေးပြိုင်ပွဲတွင်ဆက်နေရန်နှင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောမြေပြန်လည်ရရှိရန်အတွက်ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်တစ်နှစ်အတွင်းဤထိခိုက်သေဆုံးမှုအားလုံးပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ HTC U12 Plus သည် terminal ၏၎င်းကိုစီစစ်ထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိမ့်မည်, တချိန်ကကျော်ကြားခဲ့သောအခိုက်အတန့်၌အောင်မြင်မှုရရှိရန်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ယုံကြည်မှုထားရှိမည့်တူညီသောထုတ်လုပ်သည့်မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါတို့နဲ့လာပူးပေါင်းပါ!
နောက်ဆက်တွဲ ၁၇၄၀၀၀ ကျော်ပါသည့်ယူကျု့ချန်နယ် Sciense နှင့် Knowledge မှပေးသောနောက်ဆုံးအချက်အလက်များအရ၊ ဤ terminal တွင်အဆင့်မြင့်မိုဘိုင်းနှင့်ထိုက်တန်သောသတ်မှတ်ချက်များတပ်ဆင်ထားသည်၎င်းတွင် ၆.၁ လက်မ ၁၈: ၉ Super LCD18 မျက်နှာပြင်ကို ၁၄၄၀ x ၂၈၈၀ pixel resolution ဖြင့်ဖော်ပြပေးနိုင်ပြီး Corning Gorilla Glass9ကာကွယ်မှု၊ Qualcomm Snapdragon6ပရိုဆက်ဆာနှင့် Adreno 6.1 GPU၊ 1.440 / 2.880GB RAM မှတ်ဉာဏ်များနှင့် သိုလှောင်မှုပမာဏ6/ 845GB သိုလှောင်မှုပမာဏကို 630GB အထိသိုလှောင်နိုင်သော microSD ကဒ်ဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်သည်။
ဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့နိုင်သလို အနောက်ဘက်ကင်မရာနှစ်ခုပါ ၀ င်သည့် 19MPf/ 1.7 aperture PDAF ကင်မရာပါရှိသည်, နှင့် 16MP resolution ရှေ့မျက်နှာပြင်နှင့်အော်တို HDR ပါ ၀ င်သည့်အဓိကမျက်နှာပြင်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သောစွမ်းရည်သည် 1.440p အထိရှိသည်။
ထို့အပြင်၎င်းကိုလူမီနီယမ်နှင့်ဖန်ထည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ Android 8.0 Oreo ကို HTC Sense ဖြင့်အသုံးပြုသည်၎င်းတွင်လက်ဗွေဖတ်စက်တစ်ခုပါရှိသည်။ ၎င်းသည်ရေနှင့်ထိတွေ့မှုဒဏ်ခံနိုင်သည့် IP68 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပါရှိသည်။ ဖယ်ရှား။ မရသည့် ၄,၁၅၀mAh ဘက်ထရီ၊ USB 4.150 Type-C port၊ dual SIM အထောက်အပံ့၊ အမြန်ဘက်ထရီအတွက် Quick Charge 3.1 ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ အားသွင်းခြင်းနှင့်, စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်ယူရို ၈၀၀ ခန့်ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်.
မှတ်သားသင့်သည်မှာဤချန်နယ်မှထုတ်လွှင့်သောဗွီဒီယိုတွင်ပင်၎င်းကိုကန့်သတ်ထားသည် "သူတို့ကသတင်းအချက်အလက် ၁၀၀% မှန်ကန်ကြောင်းအာမခံဖို့သူတို့မှာတာဝန်မရှိပါဘူး", သောအချို့သောလက္ခဏာများအများစုအတွက်မှန်ကန်သောဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ့်, ဖြစ်ကောင်း, အားလုံးအတွက်, အကြံပြုသည်, HTC ကသူတို့ကိုအတည်မပြုမချင်းကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုအပြည့်အဝယုံကြည်ကိုး စား၍ မရပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ယိုစိမ့်မှုအရ၎င်းတို့သည် HTC U12 Plus ၏သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်